Indonesia in Focus: Maxaad Ibliiska (Shaydaan) ayaa noqday tirada cadow nin keliya?
Maxaad Ibliiska (Shaydaan) ayaa noqday tirada cadow nin keliya?
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (360)
(Qaybta saddex boqol iyo lixdan), Depok, West Java, Indonnesia, August 31, 2015, 6.16 pm).
Eebe ee Surah erayada Sad ee aayadda 71-88 ka digay dadka in Ibliisku (Shaydaan) waa tiro cadowga mid, sababtoo ah Ibliiska khiyaanayn doonaa aadanuhu dhaarta in ay raacaan martiqaad si ay u Ibliiska jahannamada ku raaci.
Habka keliya ee aadanaha in ay ka fogaadaan damacaas Ibliiska, waa inaad weydiisato caawimo iyo ilaalinta Ilaah in aanu ka mid ah kuwa ka badbaaday, si aad u hesho nimcada iyo hanuun Ilaah si ay u badbaadaan in nolosha adduun in ka dheregsan yahay tijaabo oo Ilaah u samada waarta iyo Ballaadhkeedu yahay Samaawaadka iyo Dhulka.
Sad faallo faqradaha 71-88
Aayaadka 71-88: Sharaxa of abuurka Adam 'alaihis salaan, wax aan waxba tarayn Devil, oo digniin u jirrabaadda Ibliiska, hawsha Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii, iyo sharaxay ku saabsan khatarta u yahay Gaalada.
Shaad aayadda turjumaad Letter 71-88
71.  (Xusuuso) markuu ku yidhi Eebahaa Malaa'igta, "waxaan u tegayaa inaan Dhoobo  abuuri dadka."
72. Markaas markaan way kaamileen u dhacay iyo waxaan ku neefsaday oo ruux (Abuuridda)  isaga -ku; markaas idinka dambeeyaan  sujuudi  in. "
73. Waxaana u dhawaaqday Malaa'igtii dhan Sujuuday mooyee,
74. Ibliiska haddii; uu  faantay oo uu iska lahaa quruumaha .
75. Eebe wuxuu yidhi , "Ibliisow maxaa kaa reebay inaad u sujuuddo kaan ku abuuray My laba gacmood . Ma faana ama aad (dareenka) waxaa iska leh (wax badan) sare?"
76. yidhi (ibliis) , "Waan ka kheyroon isaga waxaad iga Abuurtay Dab isagana waxaad ka Abuurtay Dhoobo ."
77. Ilaah wuxuu yidhi, "Markaas aad ka yimid samada ! Runtii, waxaad tahay uun habaaran ,
78. Waxaa dhab ahaan, My Korkaagana ha ahaato lacanade tan iyo maalinta abaalmarinta. "
79. The Ibliisku ayaa sheegay, "Eebow waxaan tangguhkanlah ilaa maalinta lasoo bixin dadka ."
Ayaa sheegay in 80 Eebe , "Oo waxaad ka mid ahaayeen kuwii la siiyey joojinta,
81. ilaa wakhtigii loo dejiyay (Maalinta Qiyaame). "
82. isaga (aadam) jawaabay , "By Your ammaan , sida xaqiiqada ah waxaan baadiyeyn dhamaantood,
83. Marka laga reebo oo addoommadaada ahu waxay la doortaa iyaga  ka mid ah.
84. Ilaah wuxuu yidhi, "Sidaas run (waa saarna), oo runta kaliya waxaan leeyahay  yahay.
85.  Bal eeg, inaan kabuuxiyo Jahannamo adiga iyo dadka iyaga oo dhan la raaco.
86.  Waxaad Dhahdaa (Nabiyow), "Ma weydiisanaya kale wax yar (dakwahku) adiga iyo ma waxaan ka mid ah kuwa ay soo qaateen  ahay.
87. Quraanka waa wax digniin ah oo dhan oo ah nooca .
88. Oo bal eeg, waad ogaan doontaan (runta) news (Quraanka) ka dib markii qaar ka mid ah mar kale . "
 Markaas Eebe wa Subhaanahu Allaah ku sheegay dood Malaa'ig, eeg sidoo kale suurada Al-Baqarah: 30.
 Taasi Adam 'alaihis salaan aabbihiis aadanaha.
 Sidaas waxa uu noqonayaa mid nool. Tiirsanaa ruuxii Eebe wa Subhaanahu Allaah waa ammaanida ah inay salaan Adam alaihis, sida disandarkannya sheegay in macbudka (guriga) Eebe si uu noqdo Baitullah (House of Ilaah), taasi oo tusinaysa mudnaanta guriga.
, taasina waa maamuus u Sujuudi, aan cibaadada u sujuud.
 Malaa'igtii isu diyaariyaan waxaa u wacan inay raaceen amarka Ilaah iyo sida baad ah si Adam 'alaihis salaan. Marka abuurka dhamaato jirka oo uu naftiisa iyo Ilaah ku imtixaamaa sirdoonka ee Adam iyo Malaa'igta la eego sayniska, waxa ay u muuqataa Adam sirdoonka cad malaa'igaha, oo Ilaah Subhaanahu wa Allaah Malaa'igta u sujuuda ku amray.
 Marka la eego amarka Eebihiis oo ka dhan ah Adam alaihis salaan.
 In sayniska Eebe wa Subhaanahu Allaah.
 Yani oo aan u sharrifnay Binii oo noqon gaar ah si ay u abuuraan labada gacmahayga, halkaas oo ay u baahan tahay in aad kuwa iskibriya isaga ka gees ah.
Ibn Jariir Qisadii by sanadnya in ilaa Mujahid, taas oo uu ku sheegayaa Ibn Cumar, ayuu ku yidhi:
"Ilaah wuxuu abuuray afartii xayawaan leh uu ku jiraa, kuwaas oo: Carshiga, samada 'Eden, Qalam (qalinka), iyo Adam. Markaasuu wuxuu ku yidhi wax walba, "Noqo!" Oo saasay wada noqon. "
 Rabbiga ka gees ah.
 Waxa uu u maleeyay in dab ka fiican tahay dalkoodii. Waa qiyas waa dhammaystirnayn (waxyeelo), maxaa yeelay, dabkii waa wax xun, haleysan yahay, sarajooggeeduna wuxuu, unfocused, iyo iftiinka. Inkasta oo ciidda waa wax in xasilloon tahay, tawadhu ', koraan dhirta, iyo inuu ku garaacday dabka oo dibadda u saaray, halka dabka loo baahan yahay si ay u xoojiyaan wax ka, halka dhulka taagan oo keliya ka.
 Waxaa jira sidoo kale leh, samada iyo waxa ka meel sharaf.
 Taas waa la eryay.
 Tan waxa u sabab ku galayeen, xumaanta iyo Colnimada Adam iyo faraciisa si uu uga dhumiyo karaan dadka ay leeyihiin oo Ilaah ditaqdirkan amban doonaa.
 Si aad ku siiyo baryadaadii uu sababtoo ah sida uu sheegay digtoonaan.
 Kadib intuu Shaydaan waa ogyahay in uu la siiyey joojinta, ayuu tusay aragti xun in Rabbiga, maxaa yeelay of Colnimada kuwa Ilaah, in Adam iyo in ay Caruurtooda.
 ayaa warqad ba 'aayaddan micnaheedu noqon karaa qasam (dhaar), taas oo ah Ibliiska ku dhaaran geesinimada Eebe, inuu Dhumiyo Dadka. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inuu u Istianah (caawimaad), kuwaas oo, maxaa yeelay, Ibliisku wuxuu ogyahay in uu yahay mid daciif ah oo dhan walba laga, iyo in uu ma aha mid dhumiya kartaa qof kasta haddii la doonayo Allaah, markaas ayuu is weydiiyay caawimo itaalka Eebe wa Subhaanahu Allaah si uu uga dhumiyo Faracoodii Aadan.
Ilaahow, annaguna waxaan nahay farac ka mid ah Adam la doonayay goor Shaydaan iyo ciidankiisii ​​oo sidaas daraaddeed ayuu Naga dhumiyo karo, waxaan ka codsaday in laga caawiyo itaalka iyo awooda aad u weyn oo aad nimco ballaaran oo kaa caawin na waxaa loola dagaallamo, badbaaday tricks ay oo waxaan u maleeyay in nooca in aad siin doonaa codsigaaga, annaguna waannu rumaysan in yabooha in aad la siin doonaa kuwa ku baryayaaye, oo waa inaan ku baryayaaye inaad sida Waxaad nagu amartay oo dhan, ka dibna si raxmad leh our petition, dhab ahaantii aad weligay jebin yaboohay yabooh run ah.
 Maxaa loola jeedaa Mukhlas halkan waa kuwa la siiyey taufiq inuu adeeco tilmaamaha iyo amarrada Alle, wa Subhaanahu Allaah, sida Mu'miniinta. O Eebe, noo yeel kuwa u Mukhlas.
 Sida ay Shaikh Sida Sa'diy, in macnaheedu ereyga Ilaah waa, in uu yahay nooca aan run iyo xaq ah waa hadalkayga.
 Waxa qasam jawabul (jawaab dhaartii tuduca hore).
 Ka dib Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii si ay u sharxaan dood iyo sharax iyaga jidka toosan, Eebana wa Subhaanahu Allaah diray Rasuulkiisa, in la yidhaahdo sida ku xusan qodobka kor ku xusan.
 Taas ma rabo inaan qof kasta oo sheeganaya in ay leeyihiin wax aan haysan, oo anigu odhan maayo, wax ma aqaano, si aanan raacin kale oo aan ahayn in lay waxyooday inay.
Mar yiri Masruq, "Waxaan u imid inaan Abdullah bin Mascuud, ka dibna wuxuu ku yidhi," nin yahow, ku alla kii wax garanayo, markaas uu ku odhan, laakiin qof kasta oo ma yaqaan, dhihi "Allahu og" (Ilaah og). Ay ka mid yihiin sayniska, sababtoo ah qof ayaa sheegay in wax uu ogayn, "Ilaah wuxuu og yahay ugu fiican", Alle wuxuu ku yidhi guys Nabiga, "Waxaad Dhahdaa (Nabiyow)," Ma idin waydiisan dakwahku mushaar kasta oo aniga ma ay ka mid yihiin dadka takalluf (isu culays). "
 Taas Quraanka waa waanada wax iyaga ka faa'iidaysan doona labada faa'iidooyin dhab ah oo dunida diinta la xidhiidha, si Quraanka waa gobol horumar ee caalamka iyo sida caddayn kuwa weli ka soo hor jeedaa halka idinkoo og.
 xaqa news Quraanka waxba samayn adduunka iyo qaar ka mid ah la fuliyo iyo aakhiraba, oo ka dhacaya dunida sidii runta ah ballankii Ilaah ee mu'miniinta si ay dagaal la cimrisiiyo ku guuleysan doono, kaas oo ka dhici Aakharaana sida runta ah ee ballanka Ilaah ee abaal-marin ama xisaabaha in la sameeyo aadanuhu.
Sida Sa'diy Shaikh yiri, "ayaa warqadda ku jira xusuus ah u noqdaan weyn oo xigmad leh, oo waa war weyn, xukunka caddayn iyo soo jeedino kuwa beeniya Quraanka iyo ka soo hor jeedda, oo beeniyey kuwa u qaadan, sidoo kale gaadhsiin doono oo addoomadiisa ka Ilaah Mukhlas, abaalmarinta kuwa wanaagga fala iyo kuwa aan rumaysnayn. Sidaa darteed, Eebe wuxuu ku dhaartaa ee bilowgii, in uu ka kooban yahay digniin iyo dhamaadka Ilaah menyifatinya in uu digniin u noqoto caalamka. Sidoo kale, Eebana wa Subhaanahu Allaah soo saari digniin ah oo u dhaxeysa bilowgii iyo dhammaadka warqaddii, sida uu hadalka, "Wadzkur 'abdnaa", "Wadz ibaadanaa kur", "Rahmatan min indinaa dzikraa wa", iyo "Haadzaa Zikr." Ya Allah , waxaan isaga baro wax garan mayno, ina xusuusinaya in aan halmaamay wax, labada illoobay in dareenka dayaca iyo waxa ay ka tanaasulaan. "
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: Ha guryahooda ka samaystaan ​​aad sida xabaalo, syaithan dhab ahaantii meel ka baxsan gurigooda oo akhriyey Suurad Al-Baqarah waxa ku jira "orday. [HR. Muslim, no: 780]
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 02 / Year XV / 1432H / 2011. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196].